Ileba anya na ICT na Naịjirịa
Ileba anya na ICT na Nigeria
Ebe E Si Nweta: Africanews
Ozi, Nkwukọrịta, na Teknụzụ (ICT) bụ sistemụ ọkwa atọ nke mgbe ejikọtara ya nke ọma na-eweta mgbanwe mgbanwe.
Ọkwa nke mbụ bụ ozi, akụkụ dị oke mkpa nke atọ ahụ, ọ na -ekwu maka data agbakọtara na nyocha. A na -anakọta data a site na isi mmalite dị iche iche.
Nkwukọrịta, nke dị n'ọkwa nke abụọ gụnyere etu esi aghọta ma nyefee ozi ahụ yana otu onye nnata si aghọta ya.
Teknụzụ nke nọ n'ọkwa nke atọ na nke ikpeazụ na -ekwu maka ihe a na -eme na ihe ekwuru ma ọ bụ ghọta.
Ụfọdụ nwere ike họrọ imepụta ngwa ngwaike site na ozi enwetara, ndị ọzọ nwere ike kpebie ịnye azịza ịntanetị.
Lelee, Nghọta gbasara mmepe ICT na Naịjirịa
Agbanyeghị, teknụzụ ejedebeghị na ngwaike na ngwọta dị n'ịntanetị, ọ sara mbara nke ukwuu na ntinye ya niile.
N’oge na -adịbeghị anya, teknụzụ emebela onwe ya n’ihu nke nrụpụta ụlọ ọrụ. Ọ bụrụla ihe dị mkpa maka mmepe mba dịka America, Great Britain ma ọ ka na -arụ ọrụ nke inyere mba ndị na -emepe emepe aka ịpụta na maapụ ụwa.
ICT nwere ike bụrụ ọsụ ụzọ mmepe, ma mmekọrịta mmadụ na ibe ya na akụ na ụba mba ọ bụla. Ijikọ mba ndị na -emepe emepe na mba ndị mepere emepe na igosipụta ohere ga -eto akụ na ụba.
Obi abụọ adịghị ya na ICT bụ onye na-agbanwe egwuregwu n'ụwa niile, ICT na Naịjirịa ejirila pasentị iri na anọ kwalite GDP obodo na 2019, na nso nso a dịka National Bureau of Statistics si kwuo, ICT nyere aka nke ukwuu na pasent 14 nke mkpokọta GDP na nkeji iri na ise mbụ. 90.75 site na mpaghara na-abụghị mmanụ.
Ngalaba na-abụghị mmanụ gụnyere ọrụ ugbo, agụmakwụkwọ, imepụta ihe, iwu ụlọ, ngalaba nlekọta ahụike n'etiti ndị ọzọ.
Ọzọkwa, n'otu mpaghara ICT mpaghara ahụ nwere oke mmụba dị elu n'etiti ngalaba akụ na ụba Naịjirịa nwere mmụba 6.47 na ngalaba ICT.
A na -atụ anya na mmụba nke GDP ga -aga n'ihu na ntinye aka nke ICT nke mgbe etinyere ya na ngalaba dị iche iche na -eduga n'inwekwu akụ na ụba.
ICT na Naịjirịa bu ụzọ nabata na 2012 iji zute nkwupụta ozi nke ibuga obodo a n'ọkwa ọzọ ebe ọ nwere ike ịsọ mpi n'ụwa niile wee wuo akụ na ụba nke dabere na obodo.
Na-agụkwa, ICT bụ isi mmalite nke atọ nke ọdịmma akụ na ụba na Naijiria - NITDA
ICT na Naịjirịa agbaala mbọ izute nkwupụta ozi ya na -eto n'ike n'ike na mmetụta ya na ọnọdụ akụ na ụba. Akụkụ dị ukwuu nke mmetụta bụ agụmakwụkwọ.
Ugbu a, Naịjirịa nwere ọnụ ọgụgụ siri ike nke ndị ntorobịa maara teknụzụ nke tinyela ICT na modulu mmụta.
Ndị ntorobịa na -enweta usoro nka nka na ịtọlite ​​mmalite site na itinye ihe ọmụma teknụzụ ha.
ICT na Naịjirịa emetụtakwala mpaghara ndị ọzọ dịka njikọta ka mma, nnyefe ọrụ, iru ndị na -ege ntị sara mbara ma na -ebelata ọnụ ahịa njem n'etiti ndị ọzọ.
N'agbanyeghị nkwalite ndị a, ICT nwere ike ime nke ọma na Naịjirịa n'okpuru ọnọdụ na atụmatụ dị mma karịa. Dịka m kwuru na mbụ ICT nwere mmetụta mkpali na mpaghara akụ na ụba ndị ọzọ niile iji meziwanye ha.
Ọ bụrụ na emepụtara gburugburu na -enyere aka na atumatu dị mma, ihe ICT na Naịjirịa na -eme ga -eju ndị niile nụrụ ya anya ka ICT dị njikere imeziwanye echiche nke akụnụba Naịjirịa.